Shiinaha Silicone Cable Winders warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Miyaad dhib ku qabtaa fiilooyinkaaga taleefannada, fiilooyinka korontada, iyo qalabka kale ee khadadka? Waxaan soo jeedineynaa inaad isticmaasho waxyaabaha ku habboon siligga silikoonnada si aad uga dhigto kuwo hagaagsan oo habeysan. Qaboojiyayaasha siligga silikoonku waa kuwo deegaan-saaxiibtinimo leh oo aan sun ahayn, way jilicsan yihiin oo siman yihiin in lagu sameeyo kala duwanaansho ...
Miyaad dhib ku qabtaa fiilooyinkaaga taleefannada, fiilooyinka korontada, iyo qalabka kale ee khadadka? Waxaan soo jeedineynaa inaad isticmaasho waxyaabaha ku habboon siligga silikoonnada si aad uga dhigto kuwo hagaagsan oo habeysan. Qaboojiyayaasha siligga silikoonku waa kuwo ku habboon deegaanka oo aan sun ahayn, way jilicsan yihiin oo siman yihiin in lagu sameeyo qaabab kala duwan, kuwaas oo si fiican u haya fiilooyinka.
Gifts Pretty Shiny Gifts ayaa soo saaray qaabab la naqshadeeyay, caaryaduhu waa u bilaash naqshadahan jira. Kooxdayada farsamo ee xirfadda leh waxay awoodaan inay sameeyaan qaababka iyo naqshadaha sida waafaqsan shuruudahaaga, waxayna ku siin doonaan talooyin badan oo faahfaahsan. Dhinaca kale, astaanta lagu daabacay ama midabka leh ee ka buuxsamay jiilaalka siligga silikoon ayaa loo habayn karaa inay xayeysiiso mashaariic kasta iyadoo loo eegayo codsiyada macmiilka. Qaboojiyaha siligga silikoonku ma aha oo kaliya qalab lagu hagaajiyo goobta shaqada, laakiin sidoo kale kanaallo aad u fiican oo lagu muujiyo fikradahaaga ama fikradahaaga.
Logos: Logos -ku waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa ama waa la dejin karaa iyadoo midab la buuxiyey
Hore: Dadka haysta Kaarka Silikoon
Xiga: Xargaha Silikoon
Fashion Fashion LED Keychain Milicsiga